DEG DEG: Xildhibaanka Kaliya ee Dumarka ka ah Baarlamaanka P/Land oo DF baaq u dirtay – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 27th February 2019 033
Xildhibaan Nimco Cabdi Caarshe oo ah xildhibaanka kaliya ee Dumarka ka ah baarlamaanka Puntland ayaa baaq u dirtay dowladda Soomaaliya kadib dhacdadii xanuunka badneyd ee ka dhacday magaalada Gaalkacyo.
Iyada oo warbaahinta kula hadlaysay magaalada Gaalkacyo ayay ka dalbatay dowladda Soomaaliya inay door weyn ka qaadato sidii baaritaan dheeri ah loogu sameyn lahaa dadkii gabadha yar ku dilay magaalada Gaalkacyo.
Waxay sheegtay in kaliya ciidamada iyo laamaha Puntland ee dhanka amaanka aysan ku filneyn kiiskan, maadaama uu yahay dhacdo xanuun badan oo laga yaabo inay gasho meelo badan, ayna adkaan karto soo qabashada dadka falkaasi abaabulay.
Xildhibaan Nimco oo sidoo kale ah gudoomiyaha guddiga Haweenka iyo xuquuql insaanka baarlamaanka Puntland ayaa sheegtay in dhacdadii Gaalkacyo ay tahay mid qalbiga shucuubta Puntland taabatay isla markaana dowladda laga rabo inay jawaab degdeg ah ka bixiso.
Dhacdada lagu dilay Caaisho ayaa qabsatay baraha bulshada, waxaana sawiro laga soo qaaday ka muuqday in jirdil xoogan loo geystay markii la kufsaday kadib.
Dhinaca kale Maxamed Ibraahim Kenyaawi oo dhacdadan ka dhacay ka hadlay ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay dadka falka geystay, isaga oo sheegay in carada alle ay ku dhici karta shacabka Soomaaliyeed.
Wuxuu ku tilmaamay inay tahay Musiibo weyn oo shacabka Soomaaliyeed heysata, isaga oo ku baaqay in dhacadaan meel looga soo wada jeesto.
TOP NEWS: Maxaadan Ogeyn oo ka Cusub Guud ahaan Deegaanada Gobolka Bakool
DAAWO: Pro Axmed Ismaaciil Samatar runtii Anigu maahi